भारतको प्रदूषण चीनको भन्दा बढी हानिकारक, यस्ताे छ कारण - Health TV Online
भारतको प्रदूषण चीनको भन्दा बढी हानिकारक, यस्ताे छ कारण
केही हप्तादेखि भारतको उत्तरी भेग चरम प्रदूषणको मारमा छ। दिल्लीको प्रदूषणले पुनः एक पटक एशियाली शहरहरूको हावाको गुणस्तरको चर्चा हुन थालेको छ।
पछिल्ला केही दशकदेखि चीनको राजधानी बेइजिङ विषाक्त हावाका लागि चर्चित छ तर ‍तथ्याङ्कले भने भारत, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशको हावाको गुणस्तर चीनको भन्दा नराम्रो रहेको देखाउँछ। दक्षिण एसिया यति धेरै प्रदूषित हुनुको कारण के हो त?
एसियाका सबैभन्दा प्रदूषित शहर
आइक्यू नामक युरोपेली संस्थाले गरेको अनुसन्धानका अनुसार विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित ३० शहर मध्ये २२ भारतमा पर्छन।
बाँकी आठ सहर पाकिस्तान, बंगलादेश र चीनमा पर्छ। तर त्यसमा बेइजिङ भने पर्दैन।
प्रदूषणका हिसाबले बेइजिङ १२२औँ स्थानमा छ। राजधानीहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरूमा एसियाली मुलुकहरूका राजधानी पर्छन्।
वार्षिक औसत पीएम २.५ को आधारमा संसारका सबैभन्दा प्रदूषित देशहरूमा सबैभन्दा अगाडि बंगलादेश छ। पाकिस्तान र भारतले त्यसपछिको स्थान ओगटेका छन्। यो सूची वार्षिक औसत वायु गुणस्तरमा आधारित छ।
यी देशहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने फरक आधार र सार्वजनिक गरिएको डाटाको पारदर्शितामा भिन्नता भएका कारण उक्त तथ्याङ्कलाई सङ्केतका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
भारतको स्तर चीनभन्दा नराम्रो हुनुको कारण
शहरी क्षेत्रमा सवारीसाधन, धेरै इन्धन खपत गर्ने पावर प्लान्ट र ठूला उद्योग प्रदूषणका प्रमुख कारण मानिन्छ।
भारतमा किसानहरूले अन्नबाली भित्र्याएपछि खेतका ठूटा र खोस्टामा आगो लगाउने गरेका छन्। त्यस्तो गतिविधि धेरै जसो शरद् ऋतुमा गरिन्छ।
‘भारतमा धेरै प्रदूषण हुनुको प्रमुख कारण किसानहरूले लगाएको आगो नै रहेको जस्तो देखिन्छ’, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमीक्सका सहायक प्राध्यापक टमस स्मिथ बताउँछन्।
कस्तो महसुस हुन्छ?
प्रदूषणको स्तर वायुमा हुने हानिकारक कणको मापनमा आधारित हुन्छ। त्यसपछि नतिजा राम्रोदेखि खतरनाकको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
‘प्रदूषणको असर प्रत्येक मानिसलाई फरक ढङ्गले पर्ने गर्छ’, युनिभर्सिटी अफ निउ साउथ वेल्सकी क्रिस्टिन कोवी भन्छिन्, ‘यसको असर सबैभन्दा बढी वृद्ध मानिसहरूमा पर्छ। श्वासप्रश्वास र मुटुको समस्या रहेका युवाहरूलाई पनि प्रदूषणले असर पार्छ।’
उनका अनुसार प्रदूषित क्षेत्रमा एकै छिन बस्नाले समेत दम रोगको समस्या पर्न सक्छ भने मस्तिष्कघातको जोखिम पनि बढाउँछ। तर यसबाट बच्ने उपायहरू भने सीमित छन्।
प्रदूषणबाट बच्न सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कनु, व्यायाम घटाउनु र मास्क लगाउनु हो।
तर आर्थिक रूपमा विपन्न राष्ट्रका नागरिकको हकमा भने यीमध्ये कुनै पनि विकल्पले धेरै काम गर्दैन।
युरोप र अमेरिकासँग तुलना
भारतको तुलनामा युरोप, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको प्रदूषणको स्तर निकै कम छ।
तर यी क्षेत्रको अवस्था पहिलेदेखि यस्तो थिएन। १९औँ र २०औँ शताब्दीमा लण्डनले प्रदूषणका कारण कुख्याति कमाएको थियो। सन् १९५२ सम्म पनि बाक्लो तुवाँलोले लण्डनलाई छोप्ने गर्थ्यो जसले गर्दा शहर नै लगभग ठप्प हुने गर्थ्यो।
लन्डनको हावामा फरक किसिमका प्रदूषणको कण रहे पनि त्यहाँको अवस्था हाल भारतको राजधानी दिल्लीभन्दा फरक नभएको हुन सक्ने नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका प्राध्यापक डेभिड टेलर बताउँछन्।
दुई महिनापछि भारतमा हवाई उडान शुरु
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५४ लाख नाघ्यो
भारतमा कोरोना संक्रमित आमाले जन्माइन् स्वस्थ जुम्ल्याहा बच्चा
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ४८ लाख नाघ्यो, ३ लाख बढीले गुमाए ज्यान
दिल्लीमा चिकित्सकसहित ४ सय बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजेटिभ
यी हुन् सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित देश, ७३ प्रतिशत संक्रमित १० देशमा मात्रै
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६० हजार नजिक